China mpanamboatra lohataona avo lenta lohataona-Z11069 mpanamboatra sy mpamatsy | TANGRUI
Ho an'ny kapila isan'andro sy ny mavesatra be eny an-dàlana, ny mpitroka hatairana dia mitazona ny Jeep hilamina tsara ary miaro ny fampiatoana azy. Na mila fanoloana ianao, fanavaozana na fanamboarana feno, Tangrui dia manolotra fihoaram-pefy mety amin'ny taona sy maodelin'ny Jeep eny an-tsena.
Ny tsara amidy ihany eto
Amin'ny maha-jeeur anao, fantatrao fa ny injeniera kalitao dia manisa ny dia tsara indrindra, ary izahay koa. Ny fanoloana ampahany manafintohina anay dia avy amin'ireo mpanamboatra ambony manomboka amin'ny Pro Comp Suspension sy Rubicon Express ka hatrany Daystar sy Bilstein, izay efa voasedra sy voaporofo fa vonona amin'ny vodin-dambanao. Ny maodely kambana, monotube ary modely fitehirizana dia azo alaina amin'ny zavatra rehetra raisinao. Ho an'ny rig eny an-dalambe efa mandroso, dia nasaronay fihoaram-pefy namboarina ho fampiatoana na koa fiakarana ho an'ny fanavaozana DIY.
Izay ilainao fotsiny
Ny ampahany sy ny kojakoja fampiatoana tsara indrindra dia tsy misy dikany firy raha tsy mifanentana amin'ny rig anao, fa ao Tangrui dia azonao antoka fa mahita ny lalao mety ianao. Ny katalaoginay an-tserasera, mandrak'androany amin'ny fanananay feno amin'ny Internet sy eto an-toerana, dia mifanaraka amin'ny maodelin'ny fiaranao hitarika anao ary hanome anao ny fampahalalana rehetra ilainao hampitahaina, hividy ary hametraka.
Natolotra ho an'ny mpanjifantsika
Tsy mirehareha amin'ny vokatra avo lenta fotsiny izahay fa amin'ny serivisy kalitao omena ny mpanjifa. Ankoatry ny haren'ny fampahalalana an-tserasera, ny ekipanay manam-pahaizana dia mandray ny fanontaniana apetrakao mba hahafahanao manapa-kevitra amin'ny zavatra hividianana. Ambonin'izany, ny vokatra rehetra amidy amin'ny Tangrui dia tohanan'ny fiantohana ny vidin'ny 90 andro. Raha mpifaninana iray no mivarotra izay nohafaranao ho ambany noho izay naloanao dia ampahafantaro anay ny famerenam-bola amin'ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny. Miaraka amin'ny ampahany lafo vidy, manam-pahaizana manokana ary vidiny tsy hay tohaina, miantsena miaraka aminay amin'ny fahatokisana fa eo am-pelatanana tsara ny Jeep-nao.
Fitsangatsanganana tsara kokoa
Miaraka amin'ny fanoloana mpitroka hatairana, dia ho tsara noho ny teo aloha ny fiaranao ary ho tsapanao avy hatrany ny mahasamihafa azy rehefa tonga eny amoron-dalana ianao. Ho hitanao fa mihamatanjaka kokoa ny fiara rehefa mandeha amin'ny lalan-tany feno fotaka ianao, mandray tsara kokoa rehefa manentsina ny rano marivo sy fampiononana tsara indrindra rehefa mandady amin'ny lalana tsy mitovy. Ho an'ny fitsangatsanganana voafehy kokoa izay mitazona ny kodiaranao hikasika ny tany eo ambaninao mba hifandraisana tsy tapaka dia mila fikoropahana Jeep ianao hanoloana ireo taloha efa tonta sy hamerenana anao amin'ny fifehezana ny fipetrahan'ny mpamily. Miaraka amin'ny safidintsika roa modely roa sy varavarana efatra izay azo atao isam-batan'olona na tsiroaroa arakaraka ny marika, dia hanana fifehezana voafehy kokoa ianao miaraka amin'ny fampisehoana tsaratsara kokoa amin'ireo mpitroka hatairana maharitra sy maharitra ireo.
Raha mitady mpitroka hatairana amin'ny Jeep na kamio ianao dia tonga amin'ny toerana mety. Manolotra safidy avy amin'ny marika tsara indrindra amin'ny indostria sy amin'ny vidiny tsy azo resena izahay. Ny vidin-tsolika isan'andro andavan'andro sy ny valim-pifidianana 100% dia manome antoka fa hitahiry vola betsaka indrindra ianao rehefa miantsena hanavao na hanova ny fiaranao. Miantsena ny fanangonana anay anio mba hanararaotra ireo vidiny mahavariana ireo sy hampiakanjo ny Jeep, kamio na SUV anao amin'ny fitaovana ilainao hampandeha azy amin'ny fampisehoana tampony.
Tsy misy toa ny mihazakazaka amin'ny làlana sy mahatsiaro ho tompon'andraikitra amin'izay alehanao. Saingy mety hitranga ny olana rehefa milentika ny oronao rehefa vaky na mihovotrovotra ao ambaninao ianao. Raha izany no izy dia tonga ny fotoana hanoloana ny mpitroka hatairana anao ary hamerina anao hifehezana eny an-dalana. Eto Tangrui, manana safidy mpitroka hatavezina avy amin'ireo marika malaza amin'ny orinasa toa ny Pro Comp Suspension, King Shocks ary Skyjacker izahay hisafidianana ny mpitroka hatairana ho an'ny fiara tsy mataho-dalana na ny mpamily isan'andro.
Brand Ho an'i Mitsubishi, Lancer
Manaraka: 28313SC010 sy 28313SC011 STEERING KNUCKLES Ho an'i Subaru -Z1253
6L8Z-30-78AA Ary ny fitaovam-piadiana YL823078AA ho an'ny ...
China Oem Shock Absorber Ho an'ny AUDI A4-Z11059
Knuckle familiana avo lenta ho an'ny Volkswagen Be ...
Kitapo fanamboarana fampiatoana ambony havia havia ankavia Ca ...
Shock Absorber fingotra, Hood Shock Absorber, Hub misy kodiarana, Tyre Ball Joint, Shock Absorber Bolt, Knuckle familiana eo aloha,